YEYINTNGE(CANADA): Saturday, March 06
Canadian MP Kelly Block with Burma Forum Participants
"Canada's renewed support builds on the significant results being achieved in Burma's border areas. Over the past five years, CIDA-funded health care initiatives have treated nearly one million cases of malaria, acute respiratory infections, tuberculosis, and severe malnutrition, provided food aid to approximately 145,000 refugees, and health care services to approximately 500,000 refugees," said Minister Oda.
"These results, along with support for community-based organizations working on human rights and environmental issues, demonstrate how Canada's assistance is helping those in need."
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/06/20100အကြံပြုခြင်း
"မတရား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကို ငုံခံနေသောတိုင်းပြည်သည် ပျက်စီးခြင်းကို မလွဲမသွေ တွေ.ရှိရ
ဟန်ဂေရီ လူမျိုး ၊ကက်သလစ်ဘာသာဝင်
" နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ. လက်အောက်မှာမနေရပေမဲ. ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ မရှိရင် ဒီနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်တဲ. နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို. မှတ်ဖို.ရှိတယ်။"
ဦးနု၏ ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်ကြ စာအုပ်မှ
" ဒူးထောက်၍အသက်ရှင်ရသည်ထက် ကိုယ်.ခြေထောက်ဖြင်.မတ်တတ်ရပ်၍ သေရသည်က မြတ်၏။"
" မိုက်မဲစွာညီညွတ်မှုသည် သေးသိမ်သောစိတ်များ၏ မကောင်းဆိုးဝါးသာ ဖြစ်သည်။"
" လူသားတွေအပေါ် ကျုးလွန်တဲ.ရာဇ၀တ်မှုတွေဟာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ. ပြည်တွင်းရေးကိစ္စ မဟုတ်ဘူး ။"
" အမှားပြုလုပ်သူကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ကူညီခြင်းမှ၇ပ်စဲသောနည်းဖြင်. အမှားကိုတိုက်ခိုက်ပစ်ရမည်။ "
"What ever they do to me,that's between then and me;I can take it.What's more important is
what they are doing to the country."
"Every man and every body of men on the earth,posses the right of self-goverment."
ခင်မာလာကြာဖြူ ၏ သမိုင်းမှထွက်ပြေးခြင်း စာအုပ်မှ
" Why we must reject 2010 Elections in Burma"
“ လွတ်လပ်စွာအသက်ရှင်ခြင်း ”
မွေးရာပါတကယ့်လွတ်လပ်တဲ့သဘာဝ့။
မတရားတဲ့အမိန်တွေကိုဖီဆန်တတ်လာ့။
သွေးချင်းညီသူတွေနဲ့လက်တွဲခဲ့။
ရှင်သန်သွားမယ့်။
6 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/riqnpy76 March 2010 Yeyintnge Diary
Saturday, 06 March 2010 16:23 ဧရာဝတီ
ဇိုရာဖန်း (ဓာတ်ပုံ - ရိုက်တာ)